Filtrer les éléments par date : jeudi, 18 novembre 2021
jeudi, 18 novembre 2021 19:51
Pilo kely : Fantaro ihany ny anaram-bady
Mpanao asa tanana :
- Allo, tsy ampy ramose ilay fitaovana fa mila ampiana ilay avance
- Alefa Mvola ?
- Ie, alefaso amin'ity numero n'ny vadiko ity
- Iza moa ilay anaran'ny vadinao ?
- (Mibitsibitsika amin'ny vadiny : iza moa ilay anaranao teo ?)
Mila manao matihanina ihany na dia mpanao asa tanana aza.
jeudi, 18 novembre 2021 11:31
Fahasalamana : Tsy mora ny asan'ny mpitsabo
Tena manaiky an'ireny dokotera ireny mihitsy aho, ny tena aza tantarain'ny olona ny manjo azy ireo, efa marary ny kibo, tsy mahita tory, maika fa ireo dokotera isan'andro isan'andro mahita ireo marary, misy ireo tsy manam-bola, nefa mety fanafody kely dia ahasitrana azy, fa noho ny tsy fisiana dia maty ho azy eo.
Azoko antoka fa nofanina hiatrika ireo fahoriana sy hiaritra ny hirifirin'ireto fianakaviana ny dokotera, sy ireo mpanampy azy, na ireto mpianatra mpitsabo, na paramed, na ireo mpiasan'ny fahasalamana, eny hatreny amin'ny mpiandry vavahady izay mahita ny fidirana sy fivoahan'ny olona, fa olombelona izy ireo, ka na mody hoe ajanona any ampiasana tsy entina mody aza ny olan'ny asa, tsy maintsy misy fiantraikany aminy ihany izany.
Mankahery anareo mpitsabo sy mpiandraikitra ny fahasalamam-bahoaka hatrany aho.
Mila atao laharam-pahamehana ity resaka fahasalamana ity, fa tsy atao pli vava akana vaton'ny mpifidy fotsiny, ka na efa ho tapitra aza ity ny taona dia na ny ariary maty aza tsy nomena ny hopitaly lehibe.
jeudi, 18 novembre 2021 11:30
Equilibre générale Projet de loi de finances 2022 (milliards d'ariary)
* Présidence 219 = 1,97%
* Primature 163 = 1,46%
* Assemblée Nationale 80 = 0,72%
* Sénat 20 = 0,18%
* CENI 12 = 0,11%
* HCC 10 = 0,09%
* CFM (Fampihavanana Malagasy) 7 = 0,06%